Shiinaha Bolsas De Regalo Long Handle Grocery Bag Midab Cotton Canvas Caano Balastar Boorsooyinkiisa Midab adag Block Totebag Pastel Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Zhihongda
Bolsas De Regalo Long Handle Grocery Bag Midab Cotton Canvas Fasalka Boorsada Boorsooyinka adag Midabka Block Totebag Pastel
Anaga oo ku dhegan mabda'aaga ah "Super Good quality, service qanacsanaanta", Waxaan ku dadaalaynaa inaan helno saaxiib ganacsi ganacsi oo aad u wanaagsan oo idinka mid ah oo ah soo saare loogu talagalay Eco Tote Bag, Waxaan daacad u nahay oo furan nahay. Waxaan horay u sii fiirineynaa joogsiga waxaanan dhidibnay xiriir jaceyl oo aamin ah oo waqti dheer soconaya.
Soosaaraha Boorsada Eco Tote, Maadaama aan nahay shaqaale aqoon leh, hal-abuur leh, oo firfircoon, waxaan mas'uul ka nahay dhammaan walxaha cilmi-baarista, qaabeynta, soo-saarista, iibinta, iyo qaybinta. Markaan baranayno oo aan horumarinayno farsamooyin cusub, ma raacayno oo keliya laakiin sidoo kale waxaan hogaamineynaa warshadaha moodada. Waxaan si taxaddar leh u dhegeysannaa jawaab celinta macaamiisheenna waxaanna siineynaa xiriir degdeg ah. Waxaad isla markiiba dareemi doontaa khibradeena iyo adeegeena foojignaanta.
1. CARRYALL CONANYENT: CARRYALL CONANYENT CARRYALL: Kuwani waa suuf caadi ah oo loo yaqaan 'canvas totebag' waa hab raaxo leh oo lagu qaado raashinka, buugaagta, iyo waxyaabo kale oo badan. Qayb kastaa waxay ka kooban tahay shan bac oo maryo la isticmaali karo ah oo loogu talagalay ku-habboonaanta shaqada ama dugsiga.
2. ECO-FRIENDLY: Waa ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo waara oo loo isticmaalo maalin kasta, bacahaan jawiga u habboon ee dib loo isticmaali karo ayaa loo isticmaali karaa si isdaba joog ah iyo ujeedooyin badan oo kaa caawinaya inaad yareyso raadadkaaga deegaanka.
3. JOOGTADA LIGHTWEIGHT: Waxay ku habboon tahay adeegsiga maalin kasta, kuwan
Bacaha dharka wax lagu iibiyo ee cudbiga ah ee suufka ah ayaa xoog ku filan si ay u taageeraan raashinka ama qalabka jimicsiga, laakiin waa iftiin ku filan oo ku ridaya boorso ama shandad boorsada ah marka aan la isticmaalin.
4. AANBADAN BANNAAN: Midabka madow ee adag ee caadadan dib loo isticmaali karo totebag shiraac suufku waa halka ugu fiican ee hal-abuurka. Naqshadee boorsadaada boorsooyinka leh astaamo dhiirrigelin ah ama u oggolow carruurta inay soo bandhigaan farshaxanadooda.
DARYEELKA FUDUD: Waxaa laga soo farsameeyay 100% cudbi dabiici ah, bacahaan dharka lagu iibiyo ee dharka ay fudud yihiin in la ilaaliyo. Si fudud maydhashada mashiinka ayaa markaa la sudhaa si loo qalajiyo si boorsooyinkaaga maro ee dib loo isticmaali karo u ekaadaan kuwa ugu fiican.
Magaca Shayga Bolsas De Regalo Long Handle Grocery Bag Midab Cotton Canvas Fasalka Boorsada Boorsooyinka adag Midabka Block Totebag Pastel
Muunad 1). Waqtiga tusaalaha: Muddo 3-5 maalmood gudahood.2). Sample charge: Sida ku cad faahfaahinta sheyga.
Muddada bixinta 30% deebaaji ah T / T kahor, 70% dheelitirka T / T kahor rarkaL / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal, Visa, Debit Card, Card Card
Hore: Bolsas De Regalo Long Handle Grocery Bag Boorsooyinka midabbada Cotton Canvas boorsooyinka leh astaan ​​daabacan oo caado ah
Xiga: Jumlada Kirismaska ​​Diy Rinjiyeynta Boorsada Boorsada Carruurta Gacan-ku-rinjiyeyn Buugga Buugga Christmas-ka Cotton Caano Tote Bag Custom daabacan
Bacda midabka midabka leh
Dambiisha Midabbada Canvas Midab leh
Boorsada suuf midab leh
Bacda Dharka Gacanta Dheer
Bacda boorsada Pastel
Bacda adag ee midabka adag
Midab adag oo midab adag leh
Eco-friendly Cotton kubado Bag Blank Cu ...
Factory baaba 'kartoo kartoo suuf organic ...
Plain Dib loo isticmaali karo suuf Raashinka Bag Shop whol ...
Raqiis 100% Cotton Caano Shopping Shopping Bag leh ...
Calaamadda caadada ah ee dib loo rogi karo oo cudbi daabacan ...
Soo-saaraha boorsada jeexjeexa ee loo yaqaan 'Bag boorsada' ...